My World: စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံး ကိုယ်ပါ
“ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ရေးစရာတွေချည်းပဲမို့ .. ကြိုးစားပြီး ရေးရပါဦးမယ်”
My World ဖြိုးဖြိုး
စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံး ကိုယ်ပါ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, February 17, 2015 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
လူတွေကြားမှာ ကိုယ်က ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နေရတာကို သူသူကိုယ်ကိုယ် ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာပါ။ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ထုတ်သုံးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရေပန်းစားမှုဟာ မားမားစွင့်စွင့်မြင့်သွားမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်နေမလဲ ကြည့်ရအောင်ပါ။
Dilbert ကာတွန်းစာအုပ်ဖန်တီးရှင် အမေရိကန်သရော်စာ စာရေးဆရာ Scott Adams က ဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းအကြံဉာဏ်ကို ပေးထားပါတယ်။ " အပြောအဆိုခပ်ဖွာဖွာတွေကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့လူသိများမှုကို လျော့ပါးစေတာကြောင့် စကားလုံး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရေး/ ပြောတတ်ပါစေတဲ့။ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကပဲ မကြာခဏ တွေး/ ပြောပေးပါ။ အဲဒါဟာ ကိုယ့်နဲ့အတူ အခန်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို စိတ်အထာကျစေတယ်။ စိတ်ငြိမ်းအေးကြည်နူးစေအောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ်က အကောင်းမြင်တဲ့ အသံအရည်အသွေး တည်ခင်းထားလိုက်တာနဲ့ပဲ အားလုံးကို စွဲဆောင်ထားမိလျက်သား အခြေအနေဖြစ်သွားစေတယ် တဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့ သူရဲကောင်းလို ပြုမှုပါ။
ကိုယ်စိတ်အဝင်အစားဆုံးလူ ၁၀ ဦးရဲ့အမည်တွေကို ရေးချပါ။ နေရာတစ်နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အဲဒီလူတွေရဲ့ ထူးထူးခြားခြားပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာ ၃ ခု ကိုလည်း စာရင်းပြုစုထားပါ လို့ စာရေးဆရာ၊ ဆုရ blogger၊ NametagTV ထုတ်လုပ်သူ Scott Ginsberg က အကြံပြုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ရဲ့ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့မူပိုင်သရုပ်သကန်အဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှာဖွေပေးပါ လို့ ဆိုတယ်။
"မင်းရဲ့ အကြောင်းပြောပြပါ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပဲဖြေပါ။
ကိုယ့်အကြောင်းဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် အသေးစိတ်အတွင်းကျကျသိနှင့်နေပြီးသားပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အများကြီး ဇာတ်လမ်းအစုံအလင် ပြောမပြပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းလေးကိုပဲ အနှစ်ချုပ်လေးဖြေကြည့်ပေးပါ။ cocktail တစ်ခွက်ဖော်စပ်ရတာဟာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးယမကာတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ cocktail တစ်ခွက်ပြင်ဆင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝထဲက ဒီလို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် plot ၃ မျိုးမှာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုတော့ အနည်းဆုံးထည့်ပေးဖို့ လိုအပ်မှာပါ လို့ စတန်းဖိုဒ့် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ပရော်ဖက်ဆာ ချစ်ပ်ဟိသ် က အကြံပြုထားတယ်။ challenge Plot (ကိုယ် ဒီနေရာကိုရောက်ရှိဖို့ အတားအဆီးတစ်ခု အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တာ)၊ creativity plot (လမ်းရိုးလမ်းဟောင်းကြီးအတိုင်း မျောပါလုပ်ဆောင်မနေဖို့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ) ဒါမှမဟုတ် connection plot (ကိုယ့်ကို မေးခွန်းထုတ်တဲ့သူ နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာကောင်းတစ်ခုခု ဥပမာ- ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားကောင်းဖြစ်ခဲ့တာ၊ အလုပ်ထဲမှာ တာဝန်ကျေသူ စသဖြင့် မေးခဲ့တဲ့ သူနဲ့ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြောဆိုနိုင်မယ့် ကိုယ့်ဘဝထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုခု) တို့ကို ရွေးချယ်ပြီး တိတိကျကျဖြေပေးပါ လို့ ဆိုပါတယ်။
မေးပါ၊ ပြီးရင် နားထောင်ပေးပါ။
တခြားမိတ်ဆွေရဲ့ ဝါသနာတွေ၊ မိသားစုအကြောင်းနဲ့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ခရီးအစီအစဉ်အကြောင်းလေးတွေက စတင်ပါ။ ကိုယ်က အဓိကဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာကို သိပြီဆိုရင် အဲဒီစကားစမြည်လမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်သွားဖို့ပါပဲ။ အဓိကအကြောင်းအရာ မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်း ပိုပြီးနားလည်လာအောင် မေးခွန်းတွေထပ်မေးပါ။ ပြီးတော့ အဖြေတွေပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုပေးထားပါ။ စိတ်ဝင်စားဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားကြည့်ပါ။
လူတွေ အားလုံး စေ့ဆော်တိုက်တွန်းနေကြသလိုပဲ စာများများဖတ်ဖို့ပါပဲ။ စာဖတ်ခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ရေပန်းစားမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရေးချပြဖို့ မလိုလောက်အောင် ကိုယ်တို့သိထားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဘယ်လို စာတွေဖတ်နေသလဲ။ သူတို့ ဘယ်လိုစာတွေဖတ်နေမလဲ စူးစမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ (ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသူကတော့ ညွှန်းဆိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေ၊ စာရးဆရာ စာရင်းတွေကို ချပြလိုက်တယ်။)
နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွေ ရလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် နှစ်သစ်မှာ စာတွေပိုပြီးတော့ ဖတ်ဖို့စိတ်ကူးထားမယ်ဆိုရင် ဒီစာရင်းလေးထဲက စာအုပ်/ စာရေးဆရာတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေမှာပါ။ စူးစမ်းဖတ်ရှုနိုင်ကြရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ ခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာ/မ များ
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Maid's Version
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Death of Sweet Mister
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Adventures of Mao on the Long March နဲ့ Self Portraits
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Green Hour
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Horse, Flower, Bird
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Complete Tales of Ketzia Gold
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Light in the Piazza
နောက်ဆုံးထုတ်ဝတ္ထု - Starting Over.
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Light in the Piazza and Other Italian Tales
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Excitability
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Vicky Swanky isaBeauty
ပထမဆုံးဝတ္ထု - I Hotel
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Windeye, the novel Immobility
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Fugue State
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Back Glasses Like Clark Kent, Bohemian Girl
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Trailer Girl and Other Stories
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Suicide Index: Putting My Father's Death in Order
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The News from Spain
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Erasure
ပထမဆုံးဝတ္ထု - I Am Not Sidney Poitier
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Where the Money Went, Everything
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Everything
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Book of Mischief
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Prosperous Friends
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Souls
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Big World
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Last Days of California
နောက်ဆုံးထုတ်ဝတ္ထု - Who Will Hear Your Secrets?
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The World Still Melting
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Jernigan
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Preston Falls
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Hysterectomy Waltz
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Kingdom of Brooklyn
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Make Me Do Things, Loverboy
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Border of Truth
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Big Ray
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - Praisesong for the Widow, Triangular Road.
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Brown Girl, Brownstones
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Virgins, The Understory
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Understory
ပထမဆုံးဝတ္ထု - Praying Drunk
ကျော်ကြားတဲ့ဝတ္ထု - The Coast of Chicago, Paper Lantern
ပထမဆုံးဝတ္ထု - The Coast of Chicago
Tell MeaRiddle by Tillie Olsen
All Quiet on the Western Front by Erich Marie Remarque
A Good Man is Hard to Find by Flannery O'Connor
The Chroncles of Narnia by C.S. Lewis
အမြဲတမ်း စိတ်ထဲတရစ်ဝဲဝဲ မေ့မရတော့မယ့်စာအုပ်တွေ
What's to Become of the Boy? by Heinrich Boll
Natural Histories by Guadalupe Nettel
The Possession by Annie Ernaux
In the Orchard, the Swallows by Peter Hobbs
The Adventures of Mao on the Long March by Frederic Tuten
The Complete Tales of Lucy Gold by Kate Bernheimer
Ravel by Jean Echenoz
Goings by Gordon Lish
Pedro Páramo by Juan Rulfo
The Mezzanine by Nicholson Baker
Deep Ellum by Brandon Hobson
For Colored Girls Who Have Considered Suicide, When the Rainbow is Enuf by Ntozake Shange
Into the War by Italo Calvino
John the Posthumous by Jason Schwartz
Source:5Easy Ways to Be the Most Interesting Person in the Room by Beth Dreher | CNN Livng
ဘန်နာမှာ အမီးလည်းပါချင်ပါတယ်ဗျို့ :P
အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ...အားရင် မဖြိုး list ထဲက ဖတ်ပါဦးမယ်း))) ရှဲရှဲနီ နီရှဲရှဲ
February 24, 2015 at 1:07 AM
အစ်မလည်းဖတ်ချင်တယ်။ ချင်တယ်။ တယ်။
စကားလုံးတွေထဲက နင်ဟာ ... ငါ့ရဲ့စိမ်းလန်းတဲ့ကမ္ဘာ
“သဇင်၊ ငါ ပရောဂျက်တစ်ခု လျှောက်ထားတာ သူတို့လက်ခံလိုက်တယ်ဟ၊ ပျော်စရာကြီး၊ နင် ဒီတစ်ခါလည်း ကူညီမယ် မဟုတ်လား” သဇင့်မျက်ခုံးကွေးကွေးနှစ်...
"To think of YOU is to Smile"
Louie, Love you
Rupa Aung | Create your badge
မယ် ရူပ | Create Your Badge
Buddha 1-16 (ဗုဒ္မ အပိုင်း၁ မှ ဗုဒ္မ အပိုင်း၁၆ထိ)
ငွေသောင်ယံဦးနှင့် အခြား ကဗျာများ
ဖိုးပလံ နှင့် ထူးထွေဆန်းရာ သည်ကမ္ဘာ
Mi Nwe Aye's
Tired of Praying
တီတင့် (စက်မှု တက္ကသိုလ်)
ပရိယတ်သမားနှင့် ပဋိပတ်သမား ၊ သညာတတ် နှင့် ပညာတတ်
အမေ ... သို့ ...
ချစ်ခြင်း၏ အပိုင်းအစများ (၃)
Tips Memasang Selang Ac Portabel
Honeymoon to New Zealand Day 12: Ziplining and Romantic Gondola Buffet
လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo
Arsenal - Burnley Live Stream
သိ င်္ဂါရ
Myanmar Literary Blog
ခရီးစဉ် ၁ မြန်မာ့ပထ၀ီ ပြန်လည်လေ့လာခြင်း အပိုင်း ( ၁၇ )
Chandelier of Versailles
May Zuu - မေဇူး
ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံးသော စာအုပ်ကလေး ( Birthday Valentine)
ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ အတွေးမှချီ လက်တွေ့ဘ၀ဆီ
စုမီအောင် Family Magazine စုလေးမေသည် မကြာမီ အထက်တန်းစာမေးပွဲကြီး ဖြေဆိုရတော့မည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် မှတ်ဥာဏ်အလွန်...
စုမီအောင် (မိန်းမ - ၁) အခန်း(၁) အယ်လီနာသည် ခုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ ပြတင်းဝမှာရပ်လို့နေမိ၏။ မကြာမီ မိုးလင်းတော့မည်။ နီ...
မိန်းမ နှင့် အနမ်း
(မိန်းမ - ၁၃) စုမီအောင် ''ငါ့ဝိညာဉ် ချစ်သောသူကို... ညဉ့်အခါအိပ်ရာပေါ်မှာ ငါရှာ၏။ ရှာသော်လည်း မတွေ့ ...&#...
အရှေ့က နေဝန်းထွန်းသည့်ပမာ တို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မလွဲပါ
(မေမေရေးတဲ့စာ) နိုဝင်ဘာလ ဂရက် နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာပြီ။ ကျွန်မတို့မဲပေးကြရတော့မယ် တဲ့။ ဘယ်သူ့ကို မဲပေးမလဲ။ ဘယ်ပုံးထဲကို ထည်...
မေမေပို့ပေးလို့ ဖတ်ကြည့်ပြီး ညက်ရေတွေပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျတယ်။ ဘာဝမ်းနည်းမှန်းမသိ :'( အသက်အားဖြင့် ၂၉နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ “ကိတ်” ဟာ နယူး...
စုမီအောင် (မေတ္တာတမန် မဂ္ဂဇင်း) တနင်္ဂနွေနေ့တွေဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းက ဂျပ်ဆင်ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းရဲ့ဂိတ်တံခါးဟာ နံနက် ...
အမှောင်ခေတ် ခရစ်တော်မပေါ်မီ သုံးရာစုနှစ်ခန့်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ မာဂဓပြည်တွင် “ဒေ၀ါနံ ပိယဒဿီအသောကာ" (လူနတ်အားလုံးချစ်ခင်သောမင်း)ဘွဲ့ခံ...
အချစ် လက်ထပ်ခြင်း နှင့် အိမ်ထောင်
ဧဗာသိပ်ပျော်နေသည်။ အိပ်မက်ထဲကသူရဲကောင်း ချာလီနှင့်လက်ထပ်ရလို့ပဲပေါ့။ ဧဗာ ဘာကလေမှာ စိတ်ပညာ ဒေါက်တာသင်တန်းတက်နေချိန် နာပါစပျစ်ခြံမှာအလုပ်လု...
၂၀၁၅ ခရီးသွားမြင်ကွင်းထဲ တိုးဝင်လာမယ့်အရာတွေ
ပထမဆုံး ၀ါသနာက ပုံဆွဲတာပါ။ နောက်တော့ စာရေးဖို့ စိတ်ဝင်စားလာရော။ အခုတော့ စာရေးခြင်းကို ချစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ အဆိုအမိန့်တွေကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။(မလိုက်နာနိုင်လို့ပါ) My first favorite is painting, Later I interest to write. Now I love in writing. "Never interest in quotes"